အစက်နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 21, 2008 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 17, 2015 Douglas Karr
သင်သည်ထုတ်ကုန်တစ်ခုရောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုတွန်းသည်ဖြစ်စေသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဖြစ်စေရောင်းသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ sketchpad တွင် ၀ ယ်ခြင်း၊ ကွပ်မျက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်အစက်သုံးခုရှိသည်။
အရောင်းဌာန - ဝယ်ယူရန်။
ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စစ်ဆင်ရေး ဦး စီးဌာန - ကွပ်မျက်ရန်။
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာန - retention အတွက်။
စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းများ၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများ၊ ဆုကြေးငွေများနှင့်စီမံချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်သူတို့၏ဘ ၀ တစ်ခုလုံးကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင် silo များတွင်သုံးစွဲခဲ့ကြသောခေါင်းဆောင်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ သူတို့၏အမြင်နှင့်အတွေ့အကြုံများကိုအာရုံစိုက်လေလေသူတို့၏ခေါင်းဆောင်မှုကို ပို၍ တန်ဖိုးထားလေလေဖြစ်သည်။ အင်တာဗျူးပြီးတဲ့နောက်မင်းပြောခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုစဉ်းစားပါ။ ' လိုအပ်ချက်။ သူကစုံလင်တယ် တော်အောင်ပြုပြင်.
ဒါကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီ။ အရောင်းသည်အလွန်ကြိုးစား။ အကောင်အထည်ဖော်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုဆုံးရှုံးရန်အတွက်သာဖောက်သည်ကြီးကိုအိတ်ချသည်။ ငါအလုပ်လုပ်ခဲ့သောကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အရောင်းအဖွဲ့များသည်လနှင့်နှစ်များကြာပြီးနောက်ဖောက်သည်နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီးစာတမ်းများကိုမည်သည့်စကားလုံးမျှပင်လက်မှတ်မထိုးဘဲတစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်တို့ထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအဖြစ်သို့ ၀ င်ရောက်သည်။ မျှော်လင့်ချက်များဘယ်တော့မျှမရခဲ့သောကြောင့်ဖောက်သည်များသည်စိတ်ဆိုးကြသည်။ Customer Service ဌာနသည်ကုမ္ပဏီ၏ MacGyver ဖြစ်ပြီးဖောက်သည်များအားပျော်ရွှင်စေရန် (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးတိတ်ဆိတ်စွာနေရန်) bobby pin နှင့် bubble gum ကိုအတူတကွစုစည်းထားသည်။ အသစ်သောအရာများရှာဖွေရန်သူတို့ကိုသိမ်းထားရန် ပို၍ ဈေးချိုသည်။
ထုတ်လုပ်မှုသည်၎င်းကိုလုံး ၀ မေ့ထားတတ်သည် တီးတိုးရုံတစည်း နှင့်အရောင်းဌာနရုံကျနော်တို့ဖောက်သည်လိုအပ်သည်ထက်ကျနော်တို့ရှိသည်အရာကိုရောင်းထွက်ရှိသင့်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲလူတိုင်းကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အော်ဟစ်အော်ငိုနေကြတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပဲ။
အဆိုပါဆက်သွယ်မှု Path ကိုပေး
ဆက်သွယ်မှုများကိုအလုပ်လုပ်ခြင်းသည်သင်စတင်ရန်လိုအပ်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သောဖြေရှင်းချက်ကိုအချိန်တိုအတွင်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောကျွမ်းကျင်သောအရောင်းအဖွဲ့မှလက်ကမ်းပေးခြင်းသည်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးမလိုအပ်သောသင်၏ကုမ္ပဏီ၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာန၏စစ်မှန်သောသူရဲကောင်းများဖြစ်စေနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်၏ကုမ္ပဏီသည် Model-T စျေးကွက်သို့ ၀ င်ထွက်ပြီးကတည်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့သောဌာနဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်တွင်ပါ ၀ င်နေမည်ဆိုပါကအနည်းဆုံးမျှဝေခြင်း၊ လက်လွဲပေးခြင်း၊ ပညာပေးခြင်းနှင့်လက်ဝါးကြီးအုပ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်ကိရိယာများကိုပေးသည်။ နယ်စပ်ကိုဘယ်လိုဖြတ်ရမယ်ဆိုတာသိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမင်းငှားနေသလား။ သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီ၏အိမ်နောက်ဖေးတွင်အတွေ့အကြုံရှိပါသလား။ သင်၏ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုသည်၎င်းပေါ်တွင်သင်၏မူတည်သည်။
ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အကြီးမားဆုံးတိုးတက်မှုကတိုက်ဆိုင်မှုလား။ ၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအမြဲမဟုတ်ပါ - အားလုံးစုစည်းထားသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်သောနေရာတွင်အရောင်းညွှန်ကြားရေးမှူးသည်ကျွန်ုပ်၏ client အခြေအနေများကိုပြန်လည်စစ်ဆေးရန်နှင့်ပြtroublနာဖြေရှင်းရန်မကြာခဏကူညီပေးသည်။ မည်သည့်အလားအလာများရှာဖွေနေသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ရန်သူနှင့်နေ့စဉ်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံလေ့ရှိသည်။
သူသည်တစ်နေ့တာလုံးအကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့်သူသုံးစွဲနေသည့်ဖောက်သည်များလိုအပ်သည်ကိုနားလည်ရန်သူတို့ကို Account Management အဖွဲ့နှင့်အချိန်ပေးသည်။ လူတိုင်းကအဲဒါကိုသဘောကျပေမယ့်ငါသေချာလုပ်! ယနေ့ညတွင်ကျွန်ုပ်၏စီအီးအိုသည်အထောက်အကူပြုဖုန်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများထဲတွင်တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ အခြေအနေကိုသူကိုယ်တိုင်မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့် အချိန်မှစ၍ ထိုအတွေ့အကြုံသည်နည်းပညာဒါရိုက်တာအနေဖြင့် ME အတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စီးပွားရေးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတာမသေချာဘူး ငါကုမ္ပဏီငယ်လေးတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်၊ ငါတို့အသင်းတွေအရမ်းတင်းကျပ်တယ်။ ကျနော်တို့နယ်မြေကိုဂရုမစိုက်ဘူး - အောင်မြင်မှုရိုးရိုးလေး။
သင်၏ဝဘ်ဆိုက်ဗျူဟာများသည်မတူပါ။ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာသို့အသစ်အဆန်းတစ် ဦး ရောက်လာသောအခါသူတို့ကိုသင်မည်သို့နှုတ်ဆက်သနည်း။ အပြုံးနှင့်ရှင်းလင်းစွာမှတ်သားထားသော menu စနစ်ဖြင့်လား။ ဒါမှမဟုတ်ကြော်ငြာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးသူတို့လိုအပ်တာကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့သိသာထင်ရှားတဲ့လမ်းညွှန်မရှိတဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုလား။ သူတို့သင့်ကိုရှာတွေ့နိုင်မယ့်လမ်းရှိလား။ သင်၏ဘလော့ဂ်၏စာမျက်နှာတိုင်းသည်စာမျက်နှာတစ်ခုလား။ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်လျှောက်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်လူအများစုတို့သည်ပင်မစာမျက်နှာမှတစ်ဆင့်မရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းသင်သဘောပေါက်သည်မဟုတ်လော။
သင်၏ထုတ်လုပ်မှုဌာန (အကြောင်းအရာရေးသားနေခြင်း) သည်သင်၏လာသူနှင့်သင်၏ site ကိုမည်သူထွက်ခွာသည်ကိုအဓိကထားပါသလား။ တိကျသောမျှော်လင့်ချက်များရှိသောဖောက်သည်များ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖောက်သည်များ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖောက်သည်များ၊ တိကျသောမျှော်လင့်ချက်များရှိသောဖောက်သည်များနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသောဖောက်သည်များကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။